ပြောင်းလဲရေ တာ့မယ့် မြန်မာပြည် က မိဘမဲ့ေ ဂဟာများ – Shwewiki.com
ကလေး ကလေး ချင်း ကိုက်ကြတာ။ ဒါတောင် Safe House မှာ ကလေး ၁၅ ယောက်ဝန်းကျင်ကို ဝန်ထမ်း ၄ ယောက် ၊ ကျောင်း မဖွင့်ခင်လာကူပေးနေတဲ့သမီးတစ်ယောက်၊ မေတ္တာနဲ့ ကူညီပေးနေတဲ့ ဂေဟာမှူးဆရာမကြီး ၊ အဲဒီဆရာမကြီးရဲ့ ညီမတွေကလည်း အားရင် အားသလို ဝိုင်းစောင့်ရှောက်ပေးနေတာ။
ဟိုတစ်လောကလည်း ကလေးတစ်ယောက် ရေနွေးပူလောင်တယ်..(ပို့စ်တင်ပြီး) စုပေါင်းနေကြတာမို့ တစ်ယောက်ဖျားရင်လည်း အကုန်ဖျားတယ်။ တစ်ယောက် အနာပေါက်ရင် အကုန်ကူးတယ်။ တစ်ယောက်ဝမ်းသွားရင် နောက်ထပ် လေးငါးယောက် အသာလေးပဲ..။ ၃ နှစ်ဝန်းကျင် ကလေးတွေမို့ စကားနဲ့ သေသေချာချာ ရှင်းပြ ပြောပြလို့မရ.. လစ်ရင် လစ်သလို အချင်းချင်း ကုတ်ကြ ကိုက်ကြ ၊ ချီးပါပြီး လူးနယ်ကြ.
ကိုဗစ်ကာလမို့ ပြင်ပ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ လက်မခံနိုင်သေးတာမို့ ဒီကလေးတွေကိုပဲ အပြည့်အဝ စောင့်ကြည့်နေတာတောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံရရင် … မနိုင်ပါ။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်ကို လူကြီး ၅ ယောက်လောက် ဝိုင်းကြည့်နေတာတောင် မနိုင်ကြဘူး မဟုတ်လား..။
ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် တွေးမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ကလေး ဆယ်ဂဏန်းကို ဝန်ထမ်းအလုံအလောက်နဲ့ ဝိုင်းစောင့်ရှောက်တဲ့ကြားက ကလေး ကလေးချင်း ရန်ဖြစ်ကြသေးရင် ရာနဲ့ချီတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာတွေမှာ ကလေး ကလေးချင်း အနိုင်ကျင့်မှု ဆိုးဆိုးရွားရွားရှိနေမှာ မလွဲပါ။
ဒီကိစ္စ (ကလေး ကလေးချင်း အနိုင်ကျင့်မှု)ဟာ တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်.. အသိဥာဏ်မရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်မို့ ကိုယ်လုပ်လိုက်တာ ဘယ်လောက် ရက်စက်ကြောင်း ကလေးတွေ မသိပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အနိုင်ကျင့်ရတဲ့ အရသာစွဲသွားပြီး ခံရတဲ့ ကလေးတွေကလည်း သူတို့ထွက်ပေါက်အတွက် သူတို့အနိုင်ကျင့်လို့ရမယ့် နောက်ထပ် ကလေး (သားကောင်)ကို ရှာကြရော။
ဒီသံသရာကြားမှာ ကလေးတွေရဲ့ နုနယ်တဲ့ နှလုံးသားထဲ ရန်လိုတဲ့ အငုံ့စိတ်ရိုင်းတွေ ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ မွေးဖွား ရှင်သန်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ဒီကလေးတွေ အများစုဟာ မျိုးစေ့ မမှန်ပါ။ (ဒီစကားမျိုး ပြောရတာ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်း..) ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားဟာ လူကြိုက်မများလည်း ပြောသင့်တယ်လို့ ခံယူပါရစေ..
မျိုးစေ့ မမှန်လို့ ပင်မသန်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်တာအပြင် သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုဗီဇထဲက မကောင်းတာတွေကိုပါ လေ့ကျင့်ဖယ်ထုတ်ပေးရပါတယ်။ ဒါ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုမှ မလုပ်နိုင်ရင်တော့ မိဘမဲ့ဂေဟာဆိုတာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ အမှိုက်တွေကို တစ်နေရာရာမှာ စုထားလိုက်တဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးပါပဲ။
ရာနဲ့ချီ ကလေးတွေ စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာတိုင်းမှာ ဒီပြဿနာ ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော် မစွပ်စွဲ.. စွပ်စွဲဖို့လည်း မသင့်.. နိုင်နိုင်နင်းနင်း အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ နေရာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများစုကတော့ မနိုင်ဝန်ကို ထမ်းနေကြောင်း ကျိန်းသေပြောန်ိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ လေး ငါးရာ ဝန်းကျင်အထိ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ထားရတယ်။ တာဝန်ကြီးလှပါတယ်။
စည်းကမ်းတကျ မရှိတဲ့အပြင် လူများတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာတွေမှာ ကလေး ကလေးချင်း အနိုင်ကျင့်မှုတွေအပြင် ကလေးချင်း ထိပါးစော်ကားတာ တွေပါ ဘယ်လောက်များရှိနေမလဲ တွေးမိရင်း သက်ပြင်းချမိတယ်။ ဒီအတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေက မွေးစားဖို့ ပေးလိုက်ခြင်းပါပဲ.
ကလေးမရလို့ အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ပြည့်စုံသော မိခင် ဖခင်လောင်းတွေ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒုနဲ့ဒေး..။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ကလေးမွေးစားဖို့ ဥပဒေဟာ အင်မတန်အဆင့်များပြီး ခက်ခဲတယ်။ (ခက်ခဲ လွန်းလှပါတယ်) ပြင်ပမှာ လူအချင်းချင်း ကလေးတစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စကို မွေးစားဖို့ စီစဉ်တာက အဆင်ပြေပေမယ့် ဂေဟာအနေနဲ့ ကလေးပေါင်းများစွာကို လူပေါင်းများစွာဆီ မွေးစားခွင့်ပြုဖို့ရာက ဥပဒေ အကူအညီ မရရင် မလွယ်ပါ။
လွယ်ကူရှင်းလင်းပြီး ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ “ကလေးမွေးစားခြင်း” ဥပဒေကို မဖော်ထုတ်နိုင်သေးသရွေ့ မိဘမဲ့ဂေဟာတွေက သိန်းနဲ့ချီသော ကလေးပေါင်းများစွာရဲ့ အနာဂတ်ဟာလည်း မှောင်မဲနေအုံးမှာပါပဲ။
ကလေးကောင်းမှ လူကြီးကောင်းမှာ။ လူကြီးကောင်းတွေများမှ တိုင်းပြည်ကောင်းမှာ ဆိုတဲ့ စကားကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်း….. မိဘမဲ့ဂေဟာတွေဆိုတာ မိဘမဲ့ကလေးတွေ များများ လက်ခံဖို့ဆိုတဲ့ လော့ဂျစ် အစား မိဘမဲ့ဂေဟာတွေဆိုတာ မိဘမဲ့ကလေးတွေ လျော့နည်းသွားစေဖို့ဆိုတဲ့ ဓလေ့ဆီကို ရည်ရွယ်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း စဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်း….။